अ श्लि ल भिडियो हेरेर २३ बर्षिय केटाले आफ्नै सौतेनी आमालाई…. - हाम्रो देश
अ श्लि ल भिडियो हेरेर २३ बर्षिय केटाले आफ्नै सौतेनी आमालाई….
त्रिसट्ठी वर्षीया सौतेनी आमालाई क र णी ग’र्ने इलामका २३ वर्षीय एक पुरुषलाई जिल्ला अदालतले ज’न्मकै’दको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्गनामको इजलासले चैत १२ गते ती व्यक्तिलाई ज’न्मकै’दसहित रु ६० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार फणिन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो ।
विसं २०७७ भदौ ७ गते राति भान्साघरमा सुतिरहेकी आमालाई भित्रबाट लगाएको ढोकाको चु’कुल हा’तले खो’लेर भित्र पसी कर णी ग’रेको पाइएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भदौ ८ गते पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । आ’रो पितलाई भदौ १० गते प्रहरीले गि’रफ्तार गरेको थियो । पी’डितको भदौ ८ गते इलाम अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
तर समाजशास्त्रीहरू भने अ’परा’धमा सं’लग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिदेखिकै अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। घटनामा कस्ता व्यक्तिहरूको सं’लग्नता हुन्छ भन्नेबारे उपत्यकाभित्र दर्ता भएका केही घटनाको अध्ययन गरेको छ। सांकेतिक तस्विर